တရုတ်နိုင်ငံ၏ ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲစွမ်းအင်ကဏ္ဍ လျင်လျင်မြန်မြန် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လက်တွဲရန် အီတလီလုပ်ငန်းစု စိတ်ဝင်စား - Xinhua News Agency
တရုတ်နိုင်ငံ၏ ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲစွမ်းအင်ကဏ္ဍ လျင်လျင်မြန်မြန် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လက်တွဲရန် အီတလီလုပ်ငန်းစု စိတ်ဝင်စား
တရုတ်နိုင်ငံအရှေ့ပိုင်း Jiangsu ပြည်နယ် မြို့နယ်အတွင်းရှိ Sheyanghu ငါးဖမ်းရေပြင်တွင် နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံး လျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်ပေးသည့် ဆိုလာပြားများကို လျှပ်စစ်ဝန်ထမ်းများက ၂၀၂၁ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာ ၃ ရက်တွင် တပ်ဆင်နေစဉ်(ဆင်ဟွာ)
ရောမ ၊ နိုဝင်ဘာ ၁၄ ရက်(ဆင်ဟွာ)
တရုတ်နိုင်ငံ၏ ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲစွမ်းအင်ကဏ္ဍသည် အကြီးဆုံးဖြစ်ပြီး ကမ္ဘာပေါ်တွင် တိုးတက်မှုအလျင်မြန်ဆုံးဖြစ်ကြောင်း နှင့် နိုဝင်ဘာ ၅ ရက် မှ ၁၀ ရက်အထိ တရုတ်နိုင်ငံ ရှန်ဟိုင်းမြို့၌ ကျင်းပခဲ့သည့် တရုတ်နိုင်ငံတကာသွင်းကုန်ပြပွဲ(CIIE) တွင် ပါဝင်တက်ရောက်ခဲ့ပြီးနောက် အီတလီနိုင်ငံ Delta OHM ကုမ္ပဏီလုပ်ငန်းစုသည် ၎င်း၏ စက်ပစ္စည်းကိရိယာထုတ်လုပ်နိုင်စွမ်းကို မြှင့်တင်သွားရန် လက်တွဲဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
တရုတ်နိုင်ငံ အရှေ့ပိုင်း ရှန်ဟိုင်းမြို့၌ ကျင်းပသော စတုတ္ထအကြိမ်မြောက် တရုတ်နိုင်ငံတကာသွင်းကုန်ပြပွဲ(CIIE) ၏ ထောက်လှမ်းရေးဆိုင်ရာစက်ပစ္စည်းကိရိယာများ နှင့် သတင်းအချက်အလက် နည်းပညာ ပြခန်းတွင် ပြသထားသည့် ဆိုလာစွမ်းအင်ခန်းဆီးနံရံတစ်ခုကို ၂၀၂၁ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာ ၅ ရက်က တွေ့ရစဉ်(ဆင်ဟွာ)
တရုတ်နိုင်ငံအရှေ့ပိုင်း Jiangsu ပြည်နယ် Baoying မြို့နယ်အတွင်း Luduo တွင် တပ်ဆင်ထားသော လျှပ်စစ်စွမ်းအင်ထုတ် လေရဟတ်များအား ၂၀၂၁ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာ ၅ ရက်ကတွေ့ရစဉ်(ဆင်ဟွာ)
Delta OHM ကုမ္ပဏီသည် အီတလီနိုင်ငံမြောက်ပိုင်း Padova မြို့အနီးတွင် အခြေစိုက်ပြီး နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံး ဆိုလာပြားများ နှင့် လေစွမ်းအင်သုံး လျှပ်စစ်တာဘိုင်များ၏ ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းအားမြှင့်တင်ရာ၌ အသုံးပြုသည့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းကိရိယာများကို ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်ထုတ်လုပ်လျက်ရှိရာ စွမ်းအင်ကုမ္ပဏီများအတွက် နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာအကူအညီများ နှင့် အခြားသော ပြဿနာရပ်များစွာကို လျင်လျင်မြန်မြန်ကူညီဖြေရှင်းပေးနေသည့် ကုမ္ပဏီလုပ်ငန်းစုကြီး တစ်ခုဖြစ်သည်။
၎င်းကုမ္ပဏီလုပ်ငန်းစုသည် တရုတ်နိုင်ငံ၌ လက်ရှိတွင် လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်နေပြီဖြစ်သည်။ သို့သော် Delta OHM သည် CIIE ပြပွဲ၌ ယခုနှစ်တွင် ပထမဆုံးအကြိမ်အဖြစ် ပါဝင်ပြသခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး တရုတ်နိုင်ငံအတွင်း ၎င်း၏ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများတိုးမြှင့်ရေးကို ကူညီရန်အတွက်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
“ CIIE မှာ အရေးပါတဲ့အခန်းကဏ္ဍတစ်ခုက ပါဝင်သွားဖို့ ဟာ ကျွန်တော်တို့အတွက် သိပ်ကိုအရေးပါတဲ့ခြေလှမ်းတစ်ရပ်ပဲဖြစ်ပါတယ်” ဟု ကုမ္ပဏီ၏ ပြည်ပကုန်သွယ်ရေးမန်နေဂျာ Cristian Mazzero က ဆင်ဟွာသို့ပြောကြားခဲ့သည်။ “ CIIE ဟာ အနာဂတ်အတွက် မြေပြင်ထိ ဆင်းပြီးလုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ရာမှာ ကျွန်တော်တို့ကို အကူအညီပေးနိုင်လိမ့်မယ်လို့ ထင်ပါတယ် ။ တစ်ခါတစ်ရံမှာ အဲဒီလိုပါဝင်ပြသခြင်းရဲ့ ထိရောက်မှုဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတာကို ကျွန်တော်တို့အသေးစိတ် မသိပါဘူး ၊ ဒါပေမယ့် တရုတ်နိုင်ငံဟာ ကျွန်တော်တို့ကုမ္ပဏီအတွက် အစွမ်းကုန်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု အခွင့်အလမ်းတွေ ဆောင်ကြဉ်းပေးမယ်ဆိုတာကိုတော့ ကျွန်တော်တို့သိပါတယ်” ဟု ၎င်းက ဆိုသည်။
အီတလီနိုင်ငံတွင် သုံးပုံတစ်ပုံခန့် နှင့် အီတလီနိုင်ငံပြင်ပတွင် သုံးပုံနှစ်ပုံဖြင့် ကုမ္ပဏီ၏ ရောင်းချမှုအပိုင်းကို နှစ်ပိုင်းခွဲခြားထားကြောင်း Mazzero ကဆိုသည်။ သို့သော်လည်း တရုတ်နိုင်ငံ၏ ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲစွမ်းအင်ကဏ္ဍ လျင်မြန်စွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာခြင်းကြောင့် ယင်းမှာ လာမည့်နှစ်တွင် ရောင်းအားအပိုင်းသည် ထူးထူးကဲကဲပြောင်းလဲသွားဖွယ်ရှိကြောင်း ၎င်း က ပြောကြားခဲ့သည်။
Statista လုပ်ငန်းစု၏ အချက်အလက်များအရ တရုတ်နိုင်ငံသည် စွမ်းအင်ထုတ်လွှတ်မှုပမာဏ ၈၉၅ ဂစ်ဂါဝတ်နှင့်အတူ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်အလွန်တွင် ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံး ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲစွမ်းအင်ကဏ္ဍကို ပိုင်ဆိုင်ထားကြောင်း သိရသည်။ ယင်းမှာ အဆိုပါပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲစွမ်းအင်ကဏ္ဍတွင် လျှပ်စစ်ထုတ်လွှတ်မှု ၂၉၂ ဂစ်ဂါဝတ်ပိုင်ဆိုင်ထားသည့် အမေရိကန်နိုင်ငံထက် သုံးဆ ပိုမိုများပြားကြောင်း သိရသည်။ ယင်းနောက်တွင် ဘရာဇီးနိုင်ငံသည် ဂစ်ဂါဝတ် ၁၅၀ နှင့်အတူ တတိယနေရာ၌ ရပ်တည်နေပြီး အိန္ဒိယနိုင်ငံက ၁၃၄ ဂစ်ဂါဝတ် နှင့် ဂျာမနီ နိုင်ငံက ၁၃၂ ဂစ်ဂါဝတ်ဖြင့် အသီးသီးရပ်တည်လျက်ရှိသည်။
Delta OHM ကုမ္ပဏီလုပ်ငန်းစုအခြေစိုက်ရာ အီတလီနိုင်ငံသည် ထုတ်မှုပမာဏ ၅၅ ဂစ်ဂါဝတ်နှင့်အတူ စာရင်းအောက်နားတွင် ရှိနေသည်။ တရုတ်နိုင်ငံသည် Delta OHM ၏ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအားလုံးတွင် အစိတ်အပိုင်းငယ်တစ်ခုအဖြစ် ဆက်လက်တည်ရှိနေကြောင်း ၊ စုစုပေါင်း ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ရောင်းချမှုအားလုံး၏ ၂ ရာခိုင်နှုန်းခန့်ကို ကိုယ်စားပြုလျက်ရှိကြောင်း နှင့် ယခုနှစ်အတွက် စီမံကိန်းတန်ဖိုး ယူရို ၁၀ သန်း(အမေရိကန်ဒေါ်လ ၁၁.၅ သန်း) ခန့်ရှိကြောင်း သိရသည်။
သို့သော်လည်း စမတ်စီးပွားရေးမဟာဗျူဟာများ၏ အကူအညီနှင့်အတူ CIIE ပြပွဲကဲ့သို့သော် အခမ်းအနားများသည် ကုမ္ပဏီ၏ ထင်ရှားကျော်ကြားမှု နှင့် မိတ်ဖက်ဆက်ဆံရေး ဦးဆောင်ဦးရွက်ပြုရန် မြှင့်တင်ပေးသည့်အပိုင်းတွင် တည်ရှိနေကြောင်း ၊ တရုတ်နိုင်ငံ၌ ရောင်းအားသည် ကုမ္ပဏီ၏ စုစုပေါင်းရောင်းအား မြင့်တက်လာခြင်းထက် လျင်မြန်စွာ တိုးတက်လျက်ရှိကြောင်း သိရသည်။
“ တရုတ်နိုင်ငံမှာ ဖြစ်နိုင်ချေအလားအလာက သိပ်ကိုကြီးမားပါတယ်” ဟု Mazzero က ပြောကြားခဲ့ပြီး “ ငါးနှစ်အတွင်း ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရောင်းအား ၁၀ ရာခိုင်နှုန်းအထိ ရောက်ရှိနိုင်မယ့် ဈေးကွက်ကြီးဖြစ်လာမယ်လို့ ထင်ပါတယ် ၊ အဲဒီနောက်မှာလည်း ဆက်ပြီး တိုးတက်နေအုံးမှာပါ” ဟု ၎င်းက ဆက်လက်ပြောကြားခဲ့သည်။ (Xinhua)
Italian firm eyes rapid growth in China’s renewable energy sector
ROME, Nov. 13 (Xinhua) — China’s renewable energy sector is the largest, and one of the fastest-growing in the world, and Italy’s Delta OHM will be helping to boost its efficiency after attending the China International Import Expo (CIIE) in Shanghai from Nov.5to 10.
Delta OHM is based near the northern Italian city of Padova, and producesawide range of equipment used to measure the efficiency of wind turbines and solar panels, allowing energy companies to rapidly identify technical glitches and other problems.
The company already hasapresence in China, but this year was the first time Delta OHM participated in the CIIE, in order to help increase its commercial reach in the country.
“It was an important step for us to playarole at CIIE,” Cristian Mazzero, the company’s foreign trade manager, told Xinhua. “We think CIIE is helping us lay the groundwork for the future. We won’t know the details about how effective the participation was for some time, but we know China representsatremendous growth opportunity for the company.”
Mazzero said the company’s sales are divided, with about one-third in Italy and two-thirds outside Italy’s borders. However, this could change dramatically in the coming years, as China’s renewable energy sector rapidly grows.
According to data firm Statista, China had the world’s largest renewable energy sector by far in 2020, with 895 gigawatts of installed capacity. That is three times larger than the equivalent sector in the United States, which had an installed capacity of 292 gigawatts. Brazil was next with 150 gigawatts, followed by India, with 134, and Germany, with 132. Italy, Delta OHM’s home base, is further down the list with 55 gigawatts of installed capacity.
Mazzero said that China remainsarelatively small part of Delta OHM’s overall business, representing around2percent of total global sales, which are projected to be around 10 million euros (11.5 million U.S. dollars) this year.
However, with the help of smart business strategies, which rely in part on events like CIIE that can help build the company’s reputation and lead to partnerships, Chinese sales will likely grow even faster than the company’s overall sales increase.
“The potential in China is incredible,” Mazzero said. “I think the market could represent 10 percent of our sales within five years and then keep growing after that.”
1Aerial photo taken on Nov. 3, 2021 shows electricity workers patrolling amidaphotovoltaic and wind power generation project installed above the fishery waters in Sheyanghu Township of Baoying County of Yangzhou, east China’s Jiangsu Province. (Xinhua/Li Bo)
2Photo taken on Nov. 5, 2021 showsasolar power curtain wall at the Intelligent Industry & Information Technology Exhibition Area of the 4th China International Import Expo (CIIE) in east China’s Shanghai. (Xinhua/Zhang Jiansong)
3Aerial photo taken on Nov. 3, 2021 showsawind power field in Luduo Township of Baoying County of Yangzhou, east China’s Jiangsu Province. (Xinhua/Li Bo)
အာဖဂန်နစ္စတန်မြို့တော်တွင် ဘတ်စ်ကားတစ်စီး တိုက်ခိုက်ခံရပြီး လူတစ်ဦးသေဆုံးကာ နှစ်ဦးဒဏ်ရာရရှိ